हामी आफैँले आफुलाई बचाउने यो महत्वपूर्ण समय हो ; नगरप्रमुख पन्त (दरौँदी विषेश कुराकानी) | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
हामी आफैँले आफुलाई बचाउने यो महत्वपूर्ण समय हो ; नगरप्रमुख पन्त (दरौँदी विषेश कुराकानी)
Published On : १३ चैत्र २०७६, बिहीबार ०८:०३
विश्वभर कोरोना भाईरसको सन्त्रास फैलिएको छ । सर्वसाधारण नागरिक सेल्फ क्वारेन्टाईनमा छन् । सरोकारवाला निकायहरु नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्नेमा लागि परेका छन् । गोरखा पनि सोमवारदेखि लकडाउनमा छ । यो समयमा गोरखाको मुख्य र ठुलो बजार क्षेत्र रहेको गोरखा नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ? कोरोनाको संक्रमणबाट सचेत रहन र नगरबासीलाई सुरक्षित राख्न नगरपालिकाले के तयारी गरिरहेको छ त ? दरौँदी दैनिकका लागि नरहरि सापकोटाले गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजनराज पन्तसँग कुराकानी गरेका छन् ः
१) कोरोना भाईरसको संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला गोरखा नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ?
संक्रमण बढ्न नदिन र आउन नदिन सुरु देखि काम गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले र केन्द्रमा गठन भएको समितिले निर्णय गरे अनुसार नगर स्तरीय कोरोना भाईरस नियन्त्रण समिति र सबै वडामा समिति गठन गरेका छौँ । नगर र वडा स्तरीय विपद् ब्यवस्थापन समिति पनि गठन गरेका छौँ । यो सँगै नगरबासीलाई चेतना अभिवृद्धीका लागि टोलटोलमा सचेतना ग¥यौँ । पर्चा बाड्ने, फ्लेक्स राख्ने काम पनि भएको छ । अहिले राज्यले गरेको लकडाउनलाई सफल बनाउन स्थानीय बासीलाई घर बाहिर ननिस्कन अत्यावस्यक काममा प्रशासनको अनुमती लिएर मात्रै हिड्न अनुरोध गरेका छौँ । खाद्य सामग्री औषधी अभाव भए खबर गर्न हामीले टोलटोलमा अनुरोध गरेका छौँ ।
२) नगरभित्रका स्वास्थ्य चौकीको अवस्था के छ ?
हामी सँग रहेका १४ वटै वडाका स्वास्थ्य ईकाई शनिवार पनि खोलेर सेवा दिईरहेका छौँ । वडामा रहेका हाम्रा स्वास्थ्य संस्था यन्त्र उपकरण र स्थानले भरिपूर्ण छैनन् । तर हामीले स्वास्थ्यकर्मी पहिले सेफ हुनुपर्छ भनेर सुरक्षा कवच आफैँ सिलाएका छौँ । बजारमा खरिद गर्न अभाव भएपछि आफैँ बनाएका हौँ । स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भएपछि सर्वसाधारणलाई सेवा दिन सक्छन् भनेर यो गरिएको हो । सुरक्षा कवच, पञ्जा, चस्मा, बुटको ब्यवस्था गरेका छौँ । स्वास्थ्य चौकीमा जानु अघि साबुनपानीले हात धुने ब्यवस्था गरिएको छ । आधरभुत औषधी सिटामल लगायतका औषधी स्वास्थ्य चौकीमा छन् ।
३) गोरखा नगरपालिका त जिल्ला भित्रने नाका पनि हो चेकजाँचको ब्यवस्था कस्तो छ ?
हो, हामीले नाका गोरखाको मझुवामा हेल्थ डेक्स राखेका छौँ । त्यहाँ प्रशासन सँगको सहकार्यमा नेपाल हार्मी र नगरपालिकाको स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरीको सहयोगमा डेक्स संचालनमा छ । जिल्ला भित्रिएकाहरुलाई ज्वरो नाप्ने, चेकजाँच गर्ने गरेका छौँ । बिदेशबाट आएकाहरुको विषेश निग्रानी गर्ने त्यहाँबाट अवस्थाको रेकर्ड राख्ने गरिरहेका छौँ ।
४) चिन्ता र चासो चाँही सर्वसाधारणको के छ ? धारण कस्तो बनेको पाउनुहुन्छ ?
चिन्ता र चासो तर अहिले सम्भवत संक्रमण आईहाल्छ कि भन्ने छ । कोरोना भाईरसको संक्रमण आउन नदिन त्यसलाई रोक्न लकडाउन गरिएको छ । कतैकतै उलंघन भएको पनि देखिन्छ । म हार्दीकता पूर्वक अनुरोध गर्न चाहान्छु, घर भित्र बसियो भने बाँचिन्छ यदी लापर्वाही गरियो भने आउने जोखिम न्यूनिकरण गर्न सहज छैन । हामी आफैँले आफुलाई बचाउने यो महत्वपूर्ण समय हो ।
५) उपचार कक्षा वा आईसोलेसन वार्ड कसरी ब्यवस्थापन गरिएको छ ?
प्रशासन, अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय सँग छलफल निरन्तर भईरहेको छ । गोरखा अस्पतालमा १२, १३ वटा वार्ड निर्माण हुन्छ । आमा बा र बरदान अस्पतालको केही कोठा, गोनपा १० को पृथ्वीनारायण सामुदायिक हस्पिटललाई आईसोलेसन वार्डको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी अघि बढाएका छौँ । गोनपा ९ मा रहेको जलाधार कार्यालयको भबनलाई पनि उपयोग गर्ने र सामुदायिक भबन, विद्यालय भबन पनि प्रयोग गर्ने गरी योजना बनेको छ ।
६) जनप्रतिनिधिहरुले कसरी सर्वसाधारणलाई सचेत गराईरहेका छन् ?
अहिले लकडाउनको अवस्था छ । त्यो भन्दा अघि सम्म टोलटोलमा जनप्रतिनिधि पुगेका थिए । अहिले बिदेशबाट आएकाहरु को छन् ? अवस्था के छ ? सचेतना अपनाएका छन्् या छैनन भन्ने विषयमा वडा अध्यक्षहरुले खोजी गरिरहनुभएको छ । सुचना दिईरहनुभएको छ । उक्त सुचना प्रशासनलाई जानकारी गराएर सेल्फ क्वारेन्टाईनमा बस्न सुझाब दिने कार्य गरिरहेका छौँ । र सर्वसाधारण नागरिकलाई राज्यका आधिकारीक निकायबाट आएका आधिकारीक विषयलाई सुचना र जानकारीका रुपमा लिन म अपिल गर्दछु ।
७) नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा खाद्यान्न, ग्याँस अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ता नगरबासीलाई छ ? ब्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
अभाव हुने अवस्था छैन । यो अवस्था रहेपनि करिब पाँच, छ महिनालाई उपलब्ध गराउने उद्योग बाणिज्य संघ र चेम्बर आवद्ध ब्यवशायीले बताएका छन् । ग्याँस पनि गोरखामा आयात भईरहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था होईन । एउटै ब्यक्तीले धेरै राख्यो भने अभाव हुन्छ । खाली सिलिण्डर बजारमा नआउँदा बिक्रेताले धेरै ढुवानी गर्न सक्दैन । त्यसैले जोहो गर्ने नाममा धेरै जम्मा नगर्नु । कुनैपनि प्रकारको अभाव, कृत्रिम अभाव, कालोबजार गोरखामा हुन दिँदैनौँ । मानविय सवेंदनको यो अवस्थामा कालोबजारी गर्ने कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारवाही गर्छौँ । जरुरी काम परेको छ भने कारण सहित प्रशासनबाट अनुमती लिएर हिड्न सकिन्छ ।
८) नगरक्षेत्र भित्रको फोहोर ब्यवस्थापन यो समयमा कसरी हुन्छ ?
बजार क्षेत्र नखुल्दा फोहोर कम हुन सक्छ । तर पनि हामीले नगरपालिकाको सवारी साधन प्रयोग गरेर फोहोर उठाउने र त्यसको उचित ब्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौँ ।
९) सर्वसाधारणलाई तपाईको भन्नु के छ ?
कोरोना भाईरसको त्रास विश्वभर फैलिएको छ । यो समयमा हामी सचेत भएर घर भित्रै सुरक्षित हुनुपर्छ । हेलचेक्राई नगरौँ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो सावधानी नै यसबाट बच्ने ठुलो उपचार र अवसर हो । आफ्नो लागि आफैँ सचेत हुनुहोस् भन्न चाहान्छु ।